Vhidhiyo yekuongorora kamera ine 360 ​​kudzivirira | Gadget Nhau
Gadget nhau | 17/07/2021 00:05 | Gadgets, Technology
Vhidhiyo yekucheresa makamera ane 360 ​​dziviriro anotendera iwe kudzora uye kuongorora yakakura seti yezvivakwa muchivako, kupatsanura kwavo maonero uye zoom in mukati kuti uone miniti tsanangudzo yadzo, pasina kurasikirwa kweiyo mhando yemhando.
1 Chii chinonzi 360 vhidhiyo yekuongorora kamera?
2 Kubatsira kwerudzi urwu rwemakamera
3 Kuchengetedza zvakadzama
Chii chinonzi 360 vhidhiyo yekuongorora kamera?
Iyo 360-degree kamera inoveli tekinoroji chishandiso iyo ine iyo kugona kutora mifananidzo kana kurekodha mavhidhiyo kuburikidza neakakura malenzi lenzi, iyo inobata nharaunda kubva kumberi nekumberi, mukuwedzera kunosanganisira mativi, siringi uye pasi peiyo nharaunda pasi pechiono chako.
ari Movistar Prosegur Alarms makamera anoshandiswa sechikamu chehurongwa hwavo hwekuchengetedza ku gadzira kona yakakura yekudzivirira, chaizvo nekuti ivo ndivo vakazara kwazvo uye vanosanganisira yekudzora mufaro izvo zvinogona kushandisirwa kubva nharembozha kuburikidza neapp uye neWi-Fi kubatana.
Nenzira iyi, iwe unozokwanisa kuona zvese zvinoitika mukati memba yako, hofisi kana bhizinesi kubva kune chero imwe nzvimbo kwaunenge uri.
Kubatsira kwerudzi urwu rwemakamera
Nekuita iyo 360 vhidhiyo yekuongorora kamera unonakidzwa nekunyudzwa kwakanyanya munharaunda, uchiona mafoto kana mavhidhiyo kubva mumaonero echigadzirwa maererano nehurefu uye kuchichinjisa kune chako kufarira kunyatso kutora kona yega yeimba yako, mukuwedzera:
Iwe uchakwanisa kuwana mapikicha uye kurarama mavhidhiyo akachengetwa mugore, kuzvishandisa kana zvichidikanwa seumboo hwemhosva kana kupinda.
Vazhinji vavo vane maviri-nzira odhiyo sechikamu chavo chekutaura-kuteerera basa, iyo inogona kuve yakakosha kana paitika njodzi. Iri basa rinokutenderawo kuti utaure nevana vako, hama dzakura kana zvipfuyo, kuitira kuti uve nechokwadi chekuti vapora.
Kune akasiyana mamodheru uye dhizainis, iyo inobvumidza kwete chete kuigadzirisa kumadziro asiwo kuishandisa mobile, kuiswa zvine hungwaru mune chero nharaunda yaunoda kuongorora.
Nokuva 360º angle inokupa iyo yakazara panoramic maonero, kudzikisira kudiwa kwekushandisa mamwe akawanda makamera, kupa yakazara yakazara kune nharaunda.
Ivo vakagadzirirwa ne infrared LED tekinoroji kuitira kuti iwe ugone kukoshesa zviitiko zvese zvakatorwa navo, kunyangwe magetsi akadzimwa.
Chengetedza zvese zvinoitwa nepfuma yako pasina kusiya mubhedha wako kana kuvapo panzvimbo; sezvo Movistar Prosegur Alarmas inokupa nharembozha yakabatana nevhidhiyo yako yekutarisa kamera ine 360 ​​kudzivirira, iyo iwe yaunogona kushandisa nekungova neinternet kuwana uye kuva neWi-Fi.
Zvekuvanzika kwako zvichavimbiswa neaya ekucheka-kumucheto tekinoroji kamera, nekuti vanhu vane mvumo chete ndivo vanozovawana uye ruzivo rwavo runofamba nenzira yakavharidzirwa kudzivirira kuitika kwemablockades kana cyberattacks.
Iyo app inosanganisirwa naMovistar Prosegur Alarmas ichave mubatsiri mukuru, nekuti kuburikidza nayo iwe unogonaiwe uchagamuchira zviziviso zvinoratidza chero chiitiko chisina kujairika; Iwe unogona kuwana zvinyorwa zvakarekodhwa mukati memazuva makumi matatu apfuura uye kunyange kurodha pasi uye kugovana navo.
Zoom yeiyo 360-degree makamera haishamise, saka iwe unozokoshesa zvakadzama kumeso kana chero chimwe chinhu chinokubata iwe.
Pasina kupokana, vhidhiyo yekuongorora kamera ine 360 ​​kudzivirira ndeye matsva matsva aunowana nhasi ekutsigira yako alarm system; Navo zvinokwanisika kutora rwendo rwechokwadi mukati mezvakatipoteredza, nekungovaisa pakukwirira kwakanaka uye munzvimbo inobvumidza kutora huwandu hukuru hwemakona.
Chiratidzo chakasvikwa nekamera inopa chiitiko chakafanana sekunge iwe wanga uchishanyira purazi, mukuwedzera kune mukana wekuti uvhure mukati kuti utore mifananidzo kana kurekodha mavhidhiyo, kana zvichidikanwa.
Vazhinji vashandisi vafunga kushandisa rudzi urwu rwe nhare mbozha sechikamu chema alarm system avo. chaizvo nekuda kwayo kuita zvinhu zvakasiyana-siyana, mhando yemufananidzo uye mukana wekutaurirana.
Ndiyo sarudzo yakanakisa, sezvo iine malenzi 72º ekuvhura uye kutenderera kwe2º, iyo yainogona kutamisirwa kwese kwese kwese tora zvinyorwa zveminiti munzvimbo hombe, ichiburitsa mukati memufananidzo kuti uwane chero chinhu chinofungidzirwa sekufungira uye kunyevera vane masimba vane masimba nenzira yakakodzera.
Kana iwe uchida kugara wakadzikama uye chengetedza kuchengetedzeka kwehama dzako kana vashandi, pamwe nekudzivirira midziyo yako kutyorwa nematsotsi, paMovistar Prosegur Alarmas iwe unowana kit inosangana nezvako zvaunoda uye bhajeti.
Zvinokurudzirwa kuti iwe unayo imwe yeaya mafoni kamera, kuitira kuti iwe uve nemaoko ako ese kutonga kwekuchengeteka kwako, kunyangwe iwe uri mune chivakwa kana kunze kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » Vhidhiyo yekuongorora kamera ine 360 ​​kudzivirira